DACA NPRM FAQ - Isbahaysiga Caafimaadka Soogalootiga & Qaxootiga
Sebtembar 28, 2021, Waaxda Amniga Gudaha (DHS) ayaa soo saartay a Ogeysiiska Xeer-dejinta La Soo Jeediyay (NPRM) iyada oo qayb ka ah nidaamka loogu talagalay in lagu ilaaliyo lana xoojiyo Talaabada Dib u Dhacday ee Imaanshiyaha Carruurnimada (DACA), siyaasadda socdaalka ee muhiimka ah. NPRM-kan waxaa qayb ka ahaa xukun uu soo saaray Garsoore Andrew Hanen oo ka tirsan Degmada Koonfurta Texas, kaas oo xukumay in DACA ay ku xad-gudbayn Xeerka Nidaamka Maamulka, ka dibna ka hor istaagay dawladda inay ansixiso codsi kasta oo cusub. Marka lagu daro NPRM, DHS waxay hadda racfaan ka qaadanaysaa xukunka Texas.
Hoos waxaa ah jawaabaha su'aalaha soo noqnoqda ee ku saabsan NPRM, xukunka Texas, iyo saamaynta ay ku leeyihiin soogalootiga iyo riyooyinka.
Waa maxay yoolka habkan sharci-dejinta?
Sida uu sheegay Xoghayaha Amniga Gudaha Alejandro Mayorkas, ujeedada habkani waa in la ilaaliyo riyooyinka iyo ilaalinta DACA.
Ma jiraan wax isbeddelo ah oo DACA lagu soo jeediyay NPRM?
Guud ahaan, NPRM waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo DACA sida ay maanta jirto. Sidan oo kale, xeerarkeeda la soo jeediyay ma beddelaan shuruudaha DACA ee jira. Taas macnaheedu waa, haddii xeerarka la soo jeediyay loo fuliyo sida ay u qoran yihiin, DACA waxay heli doontaa oo keliya dadka 1) yimid US ka hor da'da 16, 2) si joogto ah u degganaa Maraykanka tan iyo Juun 15, 2007, iyo 3) waxay joogeen Maraykanka Juun 15, 2012.
Intaa waxaa dheer, NPRM waxaa ku jira isbeddel la soo jeediyay si loogu oggolaado codsiyada DACA in la gudbiyo iyada oo aan la codsan oggolaansho shaqo. Xaaladdan oo kale, codsaduhu wuxuu soo gudbin doonaa oo keliya codsiga DACA (Foomka 821D). Kharashka codsigan wuxuu noqonayaa $85.00.
Waan u qalmaa DACA laakiin ma dalban. Habkan ama xukunka Texas miyuu iga hor istaagayaa inaan hadda codsado?
Maya. Weli waad codsan kartaa barnaamijka. DHS waxay go'aamisay, iyadoo xukunka Texas uu ka horjoogsanayo inay ansixiyaan codsiyada cusub, ay wali aqbali karaan codsiyada cusub. Codsiyada la sugayay ilaa go'aanka Juulay 16, 2021, waa la hakiyay laakiin lama xidhin ama lama diidin ilaa mid ka mid ah Xeer kama dambays ah laga soo saaro, Maxkamadda Rafcaanku ay ka noqoto xukunka, ama Maxkamadda Racfaanku waxay ballaadhisaa amarka si ay u codsato mid cusub. codsiyada.
Haddii aad ka fekereyso inaad codsato DACA, waa inaad kala hadashaa qareenka socdaalka wax ku saabsan u qalmidaada iyo haddii ay tahay inaad codsato. Waxaad heli kartaa qareen socdaalka adoo isticmaalaya agabka on this page.
Waxaan ahay Riyoon, laakiin deeqdayda DACA way dhacday. Wali ma cusbooneysiin karaa sharcigayga?
Waxaa laga yaabaa in. Haddii deeqdaada DACA ay dhacday in ka yar hal (1) sano, waxa laga yaabaa in aad wali soo gudbiso codsiga dib u cusboonaysiinta, waxana wali ka shaqayn doona DHS. Haddii deeqdaada DACA ay dhacday in ka badan hal (1) sano, waa inaad kala hadashaa qareenka socdaalka wax ku saabsan xaq u yeelashadaada iyo haddii ay tahay inaad dib u codsato.
Goorma ayaa la filayaa in la soo saaro sharci kama dambays ah?
Tani waxay ku xiran tahay arrimo badan. Qiyaasaha hadda waxay muujinayaan gu'ga 2022 ama ka dib.
Last updated: 10 / 13 / 2021